Articles | Magar Media | मगर सन्चार - Part 2
१४ बैशाख २०७४, बिहीबार १३:१० April 27, 2017
आदिबासी जनजाति र नयाँ परिवेश !
निर्मल श्रेष्ठ वि.सं. २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएकोे पनि एक वर्ष ७ महिना पुगी सकेको छ । वि.सं.२०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गई रहेका छौं । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा राष्ट्रको गहनाको रुपमा रहेको आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार र पहिचानलाई आसन्न निर्वाचनमा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल पनि चलिरहेको छ । आसन्न निर्वाचनमा बढि से बढि आदिबासी जनजातिलाई जनप्रतिनिधि छनोट गरेर तिनहिरको सवाललाई कसरी संम्वोधन गर्न सकिन्छ, यो अहम कुरा हो । यस कुरामा सरोकारवालाहरुको ठूलो भूमिका रहने गर्छ । यसको साथै संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई मूर्तता दिन राज्य, सम्बन्धित निकायको मूल दायित्व रहने गर्छ । यी विभिन्न कुराहरु उठिरहेकोे वेला आसन्न निर्वाचनको लागि सरोकारवाला उत्साहित
Articles Community News Election
१४ बैशाख २०७४, बिहीबार १२:५५ April 27, 2017
हुम सुनारी मगर हाल साउदी अरेवीया स्थानीय चुनाव २० बर्ष पछि हुँदैछ भन्नु भन्दा पनि राज्य पुन:संरचना पछि अथवा राजतन्त्रात्मकबाट मूलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिणत भए पछि हुन लागेको स्थानीय निकाय अथवा सरकारको चुनाव पहिलो पटक हुँदैछ भन्दा सान्दर्भिक होला। विगतमा जिल्ला प्रशासन र सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्न पाईने सेवा र सुविधा अब गाउँपालिका कार्यालयबाट नै सर्वसाधारण सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा यो हुन लागेको स्थानीय निकाय/सरकारको चुनावलाई २० बर्ष अगाडिको चुनावसँग तुलना गर्नु मिल्दैन। स्थानीय निकायको चुनावमा कस्तो नेता/उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने बारेमा आम सर्बसाधारण नेपाली जनता अब सचेत र चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। राष्ट्र परिवर्तन, समृद्धि र विकासका लागि कुशल, इमान्दार, योग्य र दक्ष राजनीतिज्ञको आवश्यक पर्छ। त्यस्तो नेता चुन्ने अवसर र माध्यम नै चुनाव हो। आम सर्वसाधारण जनताले
१४ बैशाख २०७४, बिहीबार १२:२३ April 27, 2017
बहुभाषिक शिक्षा बारे हाम्रो सोच !
मनबहादुर बगाले मगर बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक बहुधार्मिक देस नेपालमा अहिले नेपाली भाषा सबै जातिको साझा मानिए पनि यो यस मुलुकमा हरेक जातिको जातीय भाषा रहेको र नेपाली भाषाले अन्य जातीय भाषालाई ठूलो माछाले सानो माछालाई खाए जस्तो अाजको अवस्था छ ।अथवा नेपाली भाषा विकास हुँदै जाने र अन्य भाषा मासिंदै जाने क्रममा मगर भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले मातृ भाषाको विकास र उत्थानको लागि कार्यक्रम ल्याएको छ तर त्यो जनताको तह सम्म पुग्न नसकेको अवस्था अाजको यथार्थ हो ।प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात् नेपाली समाजमा , नेपाली राजनीतिमा धेरै नयाँ कुराहरुको उठान भयो ।त्यसै बेला पिछडिएका जाति र त्यस जातिको भाषा संस्कृतिको कुरा व्यापक रुपमा उठ्न थाल्यो ।यसै क्रममा २०४७ को संबिधानले समेत नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र
१३ बैशाख २०७४, बुधबार ००:३२ April 26, 2017
हेमा आले “बोगी” नवलपरासी दाजुभाई पाटी र खरी बोकेर पढ्न भनी जैठकको उकालो चढ्दै र झर्दै गरेको देख्दा मेरी मोईले आफ्नो रहर जनाईछिन् –“बोई ङा र पह्रिस्के नुङले । (बा, म पनि पढ्न जान्छु ।)” डुढूबाज्यूले त्यतिबेला मेरी मोईलाई झपार्दै भन्नु भयो रे –“तिमी(छोरी)हरुले पढ्न लेख्न सिकेर के काम ? तिमीहरु लाहुरे हुँदैनौ । छोराहरु पो लाहुर गएपछि चिट्ठी लेख्न अहिले पढ्नुपर्यो ।” मोई अहिले भन्छिन् –“त्यो छोरा छोरीमा गरिएको विभेद थिएन । त्यतिबेलाको हाम्रो समाज नै त्यस्तै थियो । छोरालाई लाहुरे बनाउनु र छोरी पनि लाहुरेलाई दिन पाउनु नै सबैभन्दा गौरवको कुरा थियो ।” घाँस – दाउरा, मेलापात गर्दै, कौह्रा र झाम्रेको तालमा गोडा चाल्न सिक्दै गरेर हुर्किन् मेरी मोई । गाउँमा क्यासेट घन्काउँदै, चमेलीको तेल बसाउँदै, भरियालाई सामान
११ चैत्र २०७३, शुक्रबार १२:१८ March 24, 2017
हामीले मर्दा पर्दा प्रयोग गर्ने सगुनले हामीलाई बैगुन गरिरहेको छ !
युव मगर “तिमीहरु जतिसुकै जे सुकै गरओ, तिमी मगरहरु रक्सी खाएपछि समय चिन्दैनौ ।” केही समय पहिले बबरमहलको आर्ट काउन्सिलमा आयोजित एक प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागि भएको बेला एक बाहुन मित्रले भनेको कुरा हो । सुन्दा कुरा सामान्य थियो, तर यथार्थ यही हो । उनको कुराले यो पङ्तीकारलाई निकै प्रभाब पा¥यो । उनको यो आरोप कतिपय अबस्थामा सही पनि हो । हामीले मर्दा पर्दा प्रयोग गर्ने सगुनले आज पनि हामीलाई बैगुन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी मगरहरुले हेक्का राख्न सकेका छैनौ । कोही बाहुन वा गैरमगर अथवा गैर जनजातिले हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भनेर राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको छ । तर हामीले आज सम्म पनि समीक्षा समेत गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसै कारणले नै हामी पछाडि परेका हौँ । हामीले पहिचान वा
१० फाल्गुन २०७३, मंगलवार १७:२३ February 21, 2017
बातावरणप्रती कसरी अनुदार बन्दैछन राष्ट्रपती ट्रम्प !
बिजय हितान डोनल्ड ट्रम्प चुनावी अवधीभरी बिबादित बने । यैले राष्ट्रपती भएपछी झनै त्यो क्रम जारीछ । आप्रबासिहरुलाई अमेरिका प्रबेशबाट रोक्न उनको बिशेष आदेस अदालतमा स्थगित छ भने बातावरण अमैत्री नितिले अमेरिकन राष्ट्रपतिय इतिहाँसमा उनी सर्बाधिक अलोकप्रिय राष्ट्रपती साबित भएकाछन । उनको आर्थिक उन्नतिका निति यती बातावरण अमैत्री छन कि- जल, जमिन, र वायु झनै प्रदुशित बन्नेछन । जलबायु परिवर्तन रोकिने छैन । आदिबासिहरुका प्राकृतिक स्रोत र साधनप्रतिको हक र अधिकारको हनन हुनेछन । जैबिक बिबिधता र बन्यजन्तु सम्रक्षणमा ह्रास आउनेछ । आदिबासिको अधिकारमा ट्रम्पको हस्तक्षेप सर्बप्रथम त बाराक ओबामाको पालामा रोक्का लगाइएको तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने परीयोजनालाई ट्रम्पले सुरुगर्ने भनेका छन । ११०० माइल भन्दा लामो तेल पाइपले डकोटा राज्यमा बस्ने हङ्पापा लकोटा र यङ्तोनाइ डकोटा जस्ता इन्डियन आदिबासिको बस्तिलाई
२४ माघ २०७३, सोमबार २३:२६ February 6, 2017
माघ २४, दैलेख काठमाडौंदेखी दैलेख सम्मको यात्रा, कारणबस गाडी छुट्ने समय भन्दा केही ढिला भँए म त्यै पनि टिकेट लिसकेको र मेरो सिट नजिकै बस्ने महिला नै भएको कारण मलाई अझ धेरै सजिलो भयो । मलाई गाडीले माछापोखरी भन्दा अली अगाडी आएर रोकेको थियो । गाडी चढेको केही समयमै हाम्रो मित्रता सुरु भयो एउटा हजमोला बाट । उहाँले आफुले खान खोलेको हजमोलाको एउटा गोटी मलाई दिनुभयो । मलाई त्यो खाना त्यती रुची नभए पनि उहाँले बढाएको मित्रताको हात थाम्न मन लाग्यो र खाईदिँए । एकछिन पछि मैले मिठाई दिन्छु भनि उहाँलाई हेरेँ तर उहाँ निदाउनुभएको रहेछ । एकछिनमा म पनि निदाँए । काठमाडौंको जाम धुलो धुवा बाट आजित सबै गाडी चढेदेखी कै जामले सबै वाक्क भएका थिए । हामी मस्त
२९ पुष २०७३, शुक्रबार १८:५९ January 13, 2017
मगराँत भूमिसंग गाँसिएको संस्कृति र परम्परा !
रमेश थापा मगर, गोरखा १. आरम्भ कुनैपनि जातिको अस्तित्व उसको इतिहास र भूगोलसँग जोडिएर आएको हुन्छ । भूमि वा जमिनसँग नजोडिएको जातीय अस्तित्वको कुनै अर्थ रहदैन । मगर जातिको अस्तित्वलाई मगर जातिले बसोबास गर्दै आएको भू–भागसँग अलग्गाएर बुझ्ने गरेमा गल्ती हुन जानेछ । नेपाली वृहत शब्दकोशमा ‘मगर’ तथा ‘मगराँत’ शब्दको अर्थ यसरी उल्लेख गरिएको छ –“मगर भन्नाले नेपाल अधिराज्यको मध्य पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा बस्ने भोट बर्मेली भाषिक समूहको एक जाति, मगराँतका आदिवासी भनिएको छ ।” त्यस्तै मगराँतलाई अथ्र्याउदा विशेष रुपमा मगरहरुको बसोवास तथा प्राचीन राज्य भएको क्षेत्र भन्ने बताइएको छ । यसरी प्रष्ट हुन्छ कि मगर जातिको अस्तित्व मगरात भूमिसँग गाँसिएको छ । यथार्थ यही हो मगर जातिको इतिहास धर्म, सँस्कृति, भाषा र भेषभूषा सम्पूर्ण मगराँत भूमिसँग गाँसिएको छ ।
Articles Educational Students
२८ पुष २०७३, बिहीबार १५:१२ January 12, 2017
देशको माटो अनुसार शिक्षा नीतिको आवश्यकता, बैज्ञानिक, व्यवहारीक संघीय शिक्षा हाम्रो चाहना !
दिपा आलेमगर पौष २८, काठमाडौं एक विद्वानले भनेका छन्–“एक वर्षका लागि हो भने धान रोप । एक दशककोलागि हो भने रुख रोप । एक शताब्दीकोलागि हो भने जनतालाई शिक्षित गर ।” आज नेपाल मगर विद्यार्थी संघले धान र रुख रोप्ने काम भन्दा शिक्षालाई जोड दिने काम गर्दै अघि बढेको छ । किन कि राज्यदेखि पछाडी पारिएका मगर समुदायलाई यति बेला धान र रुख होइन गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता भएको छ । जुन शिक्षा नीति देशको माटो अनुसार हुनुपर्दछ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघ देशै भर क्रियाशील सचेत र शिक्षित युवाहरुको संगठन हो । जसले मगर विद्यार्थीहरुलाई शिक्षारुपी ज्ञान फैलाउने काम गर्दै आएको छ । यति मात्र नभएर भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानकोलागि आवाज उठाउदै अघि बढिरहेको छ । विशेष गरी आफ्नै
Articles Magar Associations Magaraat (मगराँत) Magars
२२ पुष २०७३, शुक्रबार १२:०६ January 6, 2017
“जिवित साँस्कृतिक इतिहास र हाम्रो दायित्व” !
बम बहादुर घर्ती मगर उवा-८ रोल्पा, पुस २२ मानव सभ्यताको विकास सँगै कुनै पनि जातजातिले आ–आफ्नै किसिमको भाषा, धर्म, संस्कृति र भेष-भुषामा अपनाउँदै आ–आफ्नै प्रकारले जीवन व्यथित गर्दै आइरहेका छन् । जसले तिनै जातिहरुको पहिचान गराउनुको साथै परिचालित पनि गरिरहेको छ । जुन लिपिबद्ध भएर संरक्षित हुनु पर्दछ र विकसित पनि । विश्वका थोरै मात्रामा जातिहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र भेषभुषाहरु चलनचल्तीमा छन् । त्यसैको आधारमा विकसित भएर संसारभरि नै आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाउने तर्खरमा छन् भने कुनै–कुनै जातिहरुको लिपि अन्य जातिहरुको षड्यन्त्रद्वारा वा अन्य कारणले हराइनु र तिनै भाषा, धर्म र संस्कृतिहरुको लिपिबद्ध नहुनुले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । लिपिबद्ध नभएका भाषा, धर्म, संस्कृति र भेषभुषाहरुसँग सम्बन्धित जातिहरु पनि प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । त्यो पनि निश्चित क्षेत्र र भूगोलमा